China DAM3-160 MCCB kpụrụ Case Circuit emebi ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | DaDa
Okwu: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
Isi nke DAM3-160 MCCB Kpụrụ Case Circuit Breaker
Ngwunye ọkụ eletrik nke Dada DAM3-160 a kpụrụ akpụ nwere ike iru 100V. Ngwaọrụ eletriki ndị a kwesịrị ekwesị maka sekit na-ekesa ike na nke ọzọ nke 50-60Hz, voltaji na-arụ ọrụ ruru 750V, ma gosipụta ọrụ ugbu a site na 10A ruo 100A. The circuit emebi na-arụ ọrụ dị mkpa na-ekesa ike ma na-echebe circuit na ike ngwá si overloading, obere sekit na sekit, na undervoltage odida ọdịda. Enwekwara ike iji ha na igwe eletriki eletrik maka nchedo na-adịkarịghị adị na ibubighachi ya yana nchebe pụọ na mkpirisi ikuku na ọnọdụ ọkụ.
E jiri ya tụnyere usoro DAM1, a na-ahazi usoro DAM3 maka obere olu, ikike na-agbasawanye elu, na-enye ego nchekwa ọzọ.
Ngalaba Eletrọniki nke DAM3-160 Kpụrụ Akụ Circuit Breaker
Edebere ugbu a nke etiti size Inm [A]
Gosiri ugbu a [A]
Ọnụ ọgụgụ okporo osisi
Gosiri voltaji na-arụ ọrụ
Gosiri na akwadoghị akwado Uimp [KV]
Gosiri mkpuchi mkpuchi voltaji Ui [V]
Nwale voltaji na ulo oru ugboro 1 min [V]
Gosiri kacha obere-sekit na-agbasa ikike Icu [KA]
(DC) Ogwe 250V-2 n'usoro
(DC) Ogwe 500V-2 n'usoro
(DC) Ogwe 750V-4 n'usoro
(DC) 1000V-4 Osisi na usoro
E gosiri ọrụ dị mkpụmkpụ-agbasa ikike, Ics [KA]
udi nke ojiji (EN 60947-2)
Ngalaba anụ ahụ nke DAM3-160 Kpụrụ Akụ Circuit Breaker
Ntachi obi n'ibu
Basic akụkụ-ofu version
3/4 Poies W [mm]
Ofu 3/4 Poies [Kg]
Ikwunye na 3/4 Poies [Kg]
Peepụta 3/4 Poies [Kg]
Mpempe akwụkwọ sekit DAM3-160 a gbanwere na-akpaghị aka na-ebipụ nke ugbu a mgbe nke ugbu a gafere ntọala ntọhapụ. Okwu a kpụrụ akpụ na-ezo aka na insulator plastik ejiri dị ka okpokoro nke ngwaọrụ iji kpoo onye na-eduzi ya na ihe mgbakwasị ụkwụ ya.
Mara: A na-agbakwunye nkọwa nkọwa ngwaahịa.
Uru maka uru gị
Kọmpat (vingchekwa oghere)
A na-apụghị imeri emeri ma a bịa n'ịchekwa ohere: N'ihe dị iche iche nke ndị na-agbaji sekit, ndị DAM3 dị ntakịrị na klas ha ma nwee ike iji ohere nkesa bara uru nke ọma, n'agbanyeghị ma eji ha maka nkesa ike ma ọ bụ dị ka ihe nchebe maka ike na-abata n'ime ụlọ obibi ma ọ bụ na-arụ ọrụ.
Ogwe osisi nke 160 jiri ya na akara ndị ọzọ, pere mpe ma dị ike.
N'okpuru isiokwu bụ "Ihe iji belata ihe ọghọm n'ihe gbasara ọdịda",
IEC 60204-1 Idozi Ngwa - Igwe akụrụngwa nke igwe gụnyere ndụmọdụ ndị a:
"- ojiji nke ịgbanye ngwaọrụ nwere ọrụ mmeghe (ma ọ bụ kpọmkwem)."
Ihe eji eme ka imetụ akụkụ dị ndụ belata, ihe ndị a na-ebelata ihe ize ndụ nke imetụ akụkụ dị ndụ aka:
Enweghị ihu kposara ọla dị na ihu ihu
IP20 nchedo na ọnụ
IP30 nchedo na toggle
Ọ bụrụ na etinyere togg ahụ na mberede ma ọ bụ jiri ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, onweghị akụkụ dị ndụ ga-ekpughe
Enweghị akụkụ dị ndụ ga-ekpughe mgbe ọ dabara adaba
Ugboro abụọ mkpuchi
Visual Safety (egosi window)
Akara ngosi na-egosipụta ọnọdụ ON ma ọ bụ Gbanyụọ. E gosipụtara ndị na-egosi ihe ahụ n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụrụ na onye ahụ mebiri emebi na-aga njem, ọ bụ naanị ojii na-ahụ anya.
Gbanyụọ (O) Na (I)
N'ihi na a ngwa ngwa na-amalite bụ kwes na magnetik tripping ụkpụrụ ama ofu.
Usoro DAM3 dị mfe ijikwa ma na-enye ohere maka ntinye ngwa ngwa mgbe ị na-arụ ọrụ gị.
.Minging na 35mm DIN Rail (patent echebe)
Ọ na-adị mfe dabara na azụ nke 2/3 osisi DAM3-160 ụdị na-ekwe ka clip arịọnụ nke MCCB ka 35mm DIN okporo ígwè.
Nke na-eme ka ha dabara maka ịdọnye na ngwaọrụ modulu na bọọdụ nkesa.
Distribution box Distribution box Nkesa igbe Nkesa igbe
N'ịgbaso ụkpụrụ IEC / EN 60947-2 na ogo mmetọ III (IEC / EN 60947), ọ bụghị naanị na anyị hụrụ na ihe ahụ kamakwa ụkpụrụ na-enweghị atụ nke usoro DAM3 circuit breaker. Site na usoro DAM3 anyị, anyị na-egosipụtakwa nchebara echiche maka gburugburu ebe ndị a na-agbaji okirikiri na-agbaso ntuziaka RoHS ma enwere ike weghachite ya n'ọtụtụ dị ukwuu. Na nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ 一 nkecha ekike nkeDAM3 usoro ke iche CDADA imewe na-eme ka ndị a na ngwaahịa mara mma ọ bụghị naanị site a oru ma na-na site aesthetic echiche.
Obere ma Dị Ike
DAM3-160 na-enye nchedo site na ogo akara ruru 160 A na 36 kA na-agbagha ikike, agbanyeghị ịdị arọ ya na ịdị obosara nke naanị 25 mm kwa osisi. Kpakpando dị n'ime ezinụlọ ndị na-agbaji sekit, dị ka ngwaọrụ 2, 3 ma ọ bụ 4. N'ihi na a ngwa ngwa na-amalite bụ thermal na magnetik tripping ụkpụrụ ugbua ofu site CDADA.And ọ nwere nnọọ ogologo lifespan nke ruo 10,000 n'ibu ọrụ cycles. Na mgbakwunye, ekele maka mkpuchi ọnụ ya, ihe DAM3 gosipụtara ogo IP 10 nke nchebe.
Ọtụtụ nkwụnye nhọrọ
N'elu ala ma ọ bụ kwụ ọtọ? Ọ dị gị otu ị chọrọ ịrịgo DAM3 Mana n'agbanyeghị ọnọdụ arịgoro na akụkụ ị họọrọ maka inye ike, ọ ga-enye ọrụ nchekwa zuru oke oge niile.
Idozi USB: Ogwe aka na igbe ọnụ
Ejiri eriri USB egosiri na M8 scre na teknụzụ igbe igbe maka ngwa ngwa na mfe: ha abụọ dị na ngwaahịa.
Ngwọta emere iji tụọ
Ime na-agagharị, na-egosi ngbanwe ọnọdụ ma ọ bụ na-esite na voltaji na-ahapụ ma ọ bụrụ na nchekwa nke ngwa dị mkpa niile nke a dị mfe ijikwa maka DAM3.Ekele dịrị maka ngwa ngwa zuru oke, DAM3 agaghị abụ naanị egwuregwu zuru oke maka ngwa ọkọlọtọ, kamakwa ezigbo ihe ngwọta maka njikwa njikwa onye ọ bụla.
Mgbe ị rịọrọ DAM3 dịkwa ya na njikwa ntụgharị (maka ịgbago ma ọ bụ njikọ ọnụ ụzọ).
Njirimara / Akụkụ
Gosiri na ugbu a 16A upto160A
Akinggbaji ikike: 12, 18, 25, 36 kA
Idozi USB: M8 lug ma ọ bụ Ogwe Igbe
Ogwe ndị dị: 2pole, 3pole, 4poles
Volta gosiri: 400 / 415V, 50 / 60Hz
3-Ọnọdụ nkwụsị: Gbanyụọ-Njem-ON
Ọdụdọ Akụrụngwa: Nweta ma ọ bụ Ibu Ibu
Isi kọntaktị nke DAM3-160 nke a na-akpụzi ihe nkedo bụ nhazi akwụkwọ ma ọ bụ mmechi eletrik. Mgbe emechiri kọntaktị ahụ, usoro nnwere onwe na-ekpochi isi kọntaktị n'ime ọnọdụ mmechi. A na-ejikọ eriri igwe njem na njem njem ọkụ na usoro na sekit bụ isi. A na-ejikọ eriri igwe na-agagharị na ike na-arụ ọrụ.
Size nke DAM3-160 kpụrụ ikpe circuit emebi
Ngwaahịa niile enyere na katalọgụ a nwere nkwa megide nrụrụ aka na ngwa ọrụ maka ọnwa 12 site na ụbọchị ịzụta dị ka ọkọlọtọ.
CDADA nwere asambodo ISO 9001 maka imepụta, ire na kesaa ngwaahịa niile agbawara na katalọgụ a.
Nkwado teknụzụ bụ n'efu
Anyị na-enye nkwado teknụzụ n'efu na ngwanrọ ngwanrọ maka ndị ahịa niile. Nke a nwere ike ịbụ ịhọrọ ngwaahịa maka ngwa na-adịghị ahụkebe site na ịme mmụta nchedo.
Nke gara aga: DAM1 Series Kwes overload Operation Molded Case Circuit emebi (Ofu ụdị)
Osote: DAM3-250 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
4 Osisi Mccb Circuit emebi